TWO FACE 2012 (၂ မျက်နှာ ၂၀၁၂)
ကိုယ့်နိင့် ငံသား ပြည်သူ့အပေါ် ကောင်းထားသောစိတ် မရှိ
ပြည်သူ့ငြိမ်းအေး ချမ်းသာ စေလို၍ မဟုတ်
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ကမ္ဘာ့ အမြင် ကောင်းအောင်
နှိင်ငံ တကာ ဖိအား မလွဲ၍သာ
၂ မျက်နှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပါ ။
အနှစ်မထူး အသွင်ထူး ၂၀၁၂
နှစ်ပေါင်း ၆၅ နှစ် လိမ်ခဲ့ ပြီး၏
လပိုင်း နှစ်ပိုင်း နဲ့ပြောင်းလဲသွားပြီဟု ယုံကြည်ပါက
မိမိကိုယ် မိမိလှည့် စား ခြင်းသာတည်း ။
ပြောင်းလဲခြင်းကို အားလုံးမျှော်လင့် နေကြ၏
မျှော်လင့် ပုံ ခြင်းတော့မတူ
လူတစု (သို့ ) လူမျိုးတမျိုး ကလည်း သူ့ အတွက်
မျှော်လင့် ပုံ ခြင်း ဝေးကွာနေသေး သမျှ
မျှော်လင့်ခြင်း ထပ်တူ မဟုတ်နေသေး သမျှ
မည်သူမှ ငြိမ်းအေးခြင်း မရ
သနားစရာ ကောင်းလှပါ၏ ။ ။
posted by asoonyouk (အစွန်းရောက်) @ 21:250Comments
April 2012 In Burma
- အစတဲ့ လား
ပြည်သူများ၏ အောင်မြင်မှု ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော»
ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရှိပြီးနောက် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ရွှေဂုံတိုင်ရှိ NLD ရုံးချုပ်တွင်
မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများကို ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် နှုတ်ခွန်းဆက် မိန့်ခွန်းပြောဆို
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး နှင့်
သုံးခုအတွက် ဆက်လုပ်သွားပ့ါမယ်။ "
“ဒါဟာ ခေတ်သစ်တခုရဲ့ အစပျိုးမှုလို့ ကျမတို့ မျှော်လင့်ပါတယ်၊
အဲဒီ နောက် ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ နေ့တဓူဝ နိုင်ငံရေးမှာ လူထုရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို ပိုပြီး
လူထုခေတ်သစ် စပြီဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော»
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲသည် စစ်အာဏာရှင် စနစ်မှ
စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ကူးပြောင်းရာတွင် အခရာ ကျသောနေ့ ဖြစ်
NLD ပါတီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ပူးပေါင်း ပါဝင်လာသည့် လတ်တလော
နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းအရ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးနှင့် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းတို့
ပိုမိုရရှိလာမည်ဟု ယုံကြည်ရပြီး အကူအညီများနှင့်အတူ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောဆိုခဲ့သည့်
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အကောင်အထည်ပေါ်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် နိုင်ငံတကာ အပြုသဘောနဲ့ တုန့်ပြန်»
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ NLD အပြတ်အသတ်နိုင်»
"အမေကျနော်တို့ ကို ပစ်မထားပါနဲ့ "»
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သွားရောက် နူတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ တပ်မ ၅၅ က
ရဲဘော်တယောက်ကို တပ်တွင်း အချုပ်ချခံရ
ခိုးထွက်ပြီး ဒေါ်စုကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စကားလေး တခွန်းပြောလိုက်တယ်။
"အမေကျနော်တို့ ကို ပစ်မထားပါနဲ့ " တဲ့
ပြောတဲ့တပ်မတော်သားလေးက ၂ ရက်လောက် ထိန်းသိမ်းခံနေရ
posted by asoonyouk (အစွန်းရောက်) @ 21:460Comments
- what's the different?
posted by asoonyouk (အစွန်းရောက်) @ 13:320Comments
- ငါ အကန်းတယောက်
အမှန်တရား ကန်းစေတယ် ၊
ဒီလိုပဲ လူတွေ မညီမျှအောင် မညီညွတ်အောင်
သွေးခွဲတာ တော်တယ် ၊
". . . နင်တို့လို အဆိုးမြင် ၀ါဒီတွေ တွေ့ရတာ အမြင်ကပ်တယ်။" တဲ.
ဦးခင်ညွန့်ကို ကျေးဇူးတင်သူ »
ထမင်းကြမ်း တလုတ်ပြန်ပစ်ပေး တတ်တယ် ၊
အဲ့ ဒါပေါ့ကျေးဇူးရှင် တဲ့ 
ဟုတ်မှာ အသက်သခင် ကျေးဖူးရှင်ပါ
ငတ်ခဲ့ တာတော့အမှန်ပဲ မေ့ ချင်ချင် ၊
သူတပါးအား "အဆိုးမြင် ၀ါဒီတွေ" လို.ပြောလေ.ရှိတယ်၊
(အပြောခံရတာ အားလုံး ပါမည်ထင်ပါသည်)
"ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးဇူးရှင်မှန်း သိတာ မင်္ဂလာတပါးပါ"
မှန်တာ မြင်သူ ပြောသူတော့"အဆိုးမြင် ၀ါဒီတွေ" တဲ့ 
ဒီမိုကရေစီ ဟာ တချိူ.အတွက် ရွံ.စရာဖြစ် နေဆဲ နေမြဲ ၊
တယောက်အတွက် အသက်သခင် ကျေးဇူးရျင်
သန်း ၆၀ အတွက် မျက်ရည်ကျစေ ဘ၀ပျက်စေ သွေးမြေကျစေ ၊
ဒီလိုဒုက္ခတွေ ကူမဲ.သူ မျှော်နေရတဲ.အဖြစ်
ကျေးဇူးရှင်ဆို သူတွေလား . . . ၊
ကံမကောင်းတလား ညံ့ တာလား
ဒီမိုကရေစီဗီလိန် (သို့မဟုတ်) ငါးထောင်စား ဗိုလ်ခင်ညွန့် »
ခိုးသားဟာ သူတောင်ကောင်း ဖြစ်လာနှိင်သတဲ့ 
ခွေးမြီးကောက် ခြေထောက်စွတ်သတဲ့ 
အမှားဟာ လုပ် ပြီးပြီး ဗွာတေးပေါ့ ၊
ဒီမိုကရေစီ ရေးလှုပ်ရှား သူများ အား နှိပ်စက် သတ်ဖြတ် ရာတွင်
အဓိက တရားခံ ဖြစ်သူ ဦးခင်ညွန့် အား လုပ်ကြံ မည့် သတင်း များထွက်ပေါ် »
တကယ်လို့ များ ငါသည်
ခုခါများ ခွင့် ထူးခံ လူမလိုင်
ဖြစ်နေခဲ့ ရင် အကန်းတယောက် ဖြစ်သွားမလား
အသင်ကော "အို မိုးခါးရေ သောက်ပေါ့ " လို့ ပြောနေရော့ မလား
မတရားတာ မတရားဘူးလို့ ပြောနှိင်ပါစေ
မှန်တာမြင်နှိင်ပြီး မှန်တာပြောနှိင်ပါစေ ။
(မတ် ၂၇ ၂၀၁၂ အထိမ်းအမှတ်)
posted by asoonyouk (အစွန်းရောက်) @ 21:360Comments
posted by asoonyouk (အစွန်းရောက်) @ 21:580Comments
- ဒီကနေ့ဟာ ကဗျာတပုဒ်ထက်
ပိုပြီး ကြီးကျယ်ခမ်းနား နေခဲ့ပြီ်
ရောင်နီမသန်းခင်ကတည်းက အပြာရောင် သန်းတဲ့နေ့ 
- အန္တရာယ် စက်ကွင်းနဲ့
စက်ကွင်းမှ လွတ်ကင်း ကြပါစေ ..
- မြောင်းမြထောင်က လွတ်မြောက်လာသူအရှင်ဂမ္ဘီရ က
အာဏာရှင်ဆန်မှုတွေ ကျန်ရှိသေးသည်ဟု ဝေဖန်ပြောကြား
- “အမှုတွေကတော့ ဘာမှုတွေလဲ မပြောတတ်ဘူး”
- “ဘယ်လို Feeling မှ မဖြစ်ပါဘူး။ ဝမ်းလည်း မသာပါဘူး”
- “တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေးရချင်ရင် အားလုံးနဲ့ စကားပြော”
- ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို အဓိက ထား လုပ်ဆောင်မယ့်သူ
- “နိုင်ငံသား တယောက်ချင်း စီဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ မပတ်သက်လို့
- လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ဖို့ ပြန်လာပြီ (နေဘုန်းလတ်)
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကြိုဆို
- ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ABSDF ကို ကမ်းလှမ်းပြီ
နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​များ​ လွတ်​မြောက်မှု တိုက်ရိုက် သတင်းတင်ပြချက်
posted by asoonyouk (အစွန်းရောက်) @ 22:230Comments